မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်နည်း | မေတ္တာရိပ်
← နို့နှစ်လုံးဖိုး ကျေပါတယ်
Posted on October 24, 2009	by mettayate
“ငါဘုရား မိဘကျေးဇူးကို အကျေဆပ်နိုင်သလို သင်ချစ်သား ချစ်သမီးတို့လည်း မိဘကျေးဇူးကို အကျေဆပ်နိုင်ပါတယ်” လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက မိဘကျေးဇူးကို အကျေမဆပ်နိုင်ဘူးလို့ မဟောခဲ့ပါဘူး။ ကျေအောင်ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး လို့ ဟောတော်မူခဲ့တာပါ။ သာမာန်ဆပ်ရုံနဲ့ ကျေးဇူးမကျေနိုင်ဘူး။ အထူးဆပ်မှ ကျေးဇူးကျေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
“ချစ်သား ချစ်သမီးတို့ . ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက် မွေးမိခင်နဲ့ မွေးဖခင် ရဲ့ကျေးဇူးကို အလွယ်တကူ ဆပ်ရုံနဲ့ မကျေနိုင်ဘူး။ ကျေအောင်ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး လို့ ငါဘုရားပြောချင်ပါတယ်။
နှစ်တစ်ရာတမ်းမှာ အနှစ်တစ်ရာအသက်ရှည်တဲ့ သားသမီးက အမေကို လက်ယာပခုံးမှာတင်၊ အဖေကို လက်ဝဲပခုံးမှာတင်ပြီး ရာသက်ပန်ပြုစုလုပ်ကျွေးတယ် ဆိုကြပါစို့၊ ပခုံးထက်က မိဘနှစ်ပါးကို မွှေးပျံ့သင်းကြိုင်အောင် နံ့သာမျိုးစုံနဲ့လည်း ပွတ်တိုက်လိမ်းကျံပေးတယ်။ အညောင်းအညာပြေအောင် လက်တွေ ခြေတွေကိုလည်း ဆုပ်နယ်ပေး နှိပ်ပေးယ်။ အေးတဲ့အခါ ရေနွေး၊ ပူတဲ့အခါ ရေအေးနဲ့လည်း ရေချိုးသန့်စင်ပေးတယ်။ ကိုယ်လက်ပေါ့ပါးချမ်းသာအောင် လက်တွေ ခြေတွေကိုလည်း ဆွဲဆန့်ပေးတယ်။ ပခုံးထက်မှာပဲ ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်စေတယ်။
အဲဒီလောက် ပြုစုလုပ်ကျွေးပေမယ့် မိဘကျေးဇူးကို တုံ့ပြန်ပြီးသား အကျေဆပ်ပြီးသား မဖြစ်သေးပါဘူး။ “
“ချစ်သား ချစ်သမီးတို့ .. စကားကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင် မိဘနှစ်ပါးကို နှစ်သက်ဖွယ်ရတနာတွေ အများကြီးရှိတဲ့ တစ်မြေပြင်လုံးကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ်အကြီးအကဲလုပ်နိုင်တဲ့ စကြာဝတေးမင်းရာထားမှာထားပြီး ကျေးဇူးဆပ်ဦးတော့၊ မိဘကျေးဇူးကို ကျေအောင်ဆပ်ရာ မရောက်သေးပါဘူး။ “
“ချစ်သား ချစ်သမီးတို့ . ဒိလောက်ကျေးဇူးဆပ်ရက်သားနဲ့ ဘာလို့ ကျေးဇူးမကျေနိုင်ရတာလဲဆိုရင် မိဘတွေဟာ သားသမီးအပေါ် သိပ်ကို ကျေးဇူးများကြလို့။ သားသမီးတွေကို ကြီးပြင်းရွယ်ရောက် လူလားမြောက်အောင် ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ကြလို့။ နို့ချိုတိုက်ကျွေးမွေးမြူကြလို့။ ဒီလောကကြီးရဲ့အာရုံကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးကို သိမြင်အောင် သေချာပြသကြလို့ပါပဲ။”
“ချစ်သား ချစ်သမီးတို့ . မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို ငါဘုရားညွှန်ပြပါရစေ။
၁) သဒ္ဓါတရားမရှိတဲ့မိဘကို သဒ္ဓါတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင် (ရတနာသုံးပါးသာ ကိုးကွယ်ရာအစစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုသတ္တိ)၊
၂) သီလမရှိတဲ့ မိဘကို သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင် (သီလမရှိရင် အနာရောဂါများတတ်ကြောင်း၊ သေခါနီး ကောင်းရာသုဂတိရောက်ရေးကိစ္စ)၊
၃) မပေးရက် မလှူရက်နှမြောဝန်တိုတဲ့မိဘကို စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း (မေတ္တာစေတနာနဲ့ပေးသမျှ ကိုယ်ရဖို့သာချည်းဖြစ်ကြောင်း) နှင့်
၄) ပညာဉာဏ်မရှိတဲ့ မိဘကို ပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင် (အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ အပြုသဘောဖြစ်အောင်၊ ပစ္စုပ္ပုန်စိတ်အေးချမ်းဖို့နဲ့သံသရာဘ၀လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပါ ၀ိပဿနာမလုပ်မဖြစ် အရေးကြီးကြောင်း) ကောင်းစွာနာယူဆောက်တည်စေမယ်။ လေးလေးနက်နက် သက်ဝင်စေမယ်။ ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ တည်တံ့မြဲမြံစေမယ်ဆိုရင် မိဘကျေးဇူးကို တုံ့ပြန်ပြီးသား၊ အကျေဆပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။
မိဘကျေးဇူးဆပ်တဲ့နေရာမှာ လောကနည်းနဲ့ ဆပ်ခြင်း၊ ဓမ္မနည်းနဲ့ ဆပ်ခြင်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
လောကနည်းနဲ့ ဆပ်နည်း – မိဘအတွက် အစားအသောက်၊ အ၀တ်အထည်၊ နေအိမ်တိုက်တာ၊ ကားရထားစတဲ့ လူမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ ပြည့်စုံအောင် စီမံဖန်တီးပေးထာကို ခေါ်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျေးဇူးဆပ်နည်း – မိဘရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်တာကို ခေါ်ပါတယ်။
လောကနည်းနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်တာကို မကျေနိုင်ဘူးလို့ ပြောတာပါ။ သို့ပေမယ့် လောကနည်းနဲ့လည်း ဆပ်တော့ဆပ်နေရမှာပါပဲ။ ဥပမာ – သီတင်းကျွတ်ကျမှ မိဘကို ကန်တော့တာမျိုး၊ နှစ်သစ်ကူးကျမှမိဘကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးထာမျိုးလောက်နဲ့ ကျေနပ်မနေဘဲ နေ့စဉ် လစဉ်ဆိုသလို မိဘကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။
မိဘက ကိုယ့်ကိုထမင်းဘယ်နှနပ် ကျွေးခဲ့ဖူးသလဲ။
ကိုယ်ကရော မိဘကို ထမင်းဘယ်နှနပ်ပြန်ကျွေးခဲ့ပြီးပြီလဲ။
မိဘက ကိုယ့်ကိုအကျီင်္ လုံချည်ဘယ်နှထည်ဆင်ခဲ့ဖူးသလဲ။
ကိုယ်ကရော မိဘကို အကျီင်္ လုံချည်ဘယ်နှထည် ၀ယ်ပေးပြီးပြီလဲ။
“ပြန်တွေးကြည့်ရင် ရှက်စရာဆိုတဲ့စကားမျိုး” ဘယ်တော့မှ ပြောစရာ မလိုအောင် အစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည့်ပေးလိုက်ပါ။
မိဘသေခါမှ “ကျေးဇူးမလိုက်ရလေခြင်း” လို့ အရှက်မရှိ အော်ငိုမနေပါနဲ့။
ပေးမှ၊ လှူမှ မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘရဲ့ဝေယျာဝစ္စ ကိစ္စကြီးငယ်ကို လက်ရုံးအားနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာလည်း ကျေးဇူးဆပ်နေတာပါပဲ။ “မိဘရဲ့အင်္ကျီလုံချည် လျှော်ဖွပ်ပေးတာတို့၊ မိဘကို အညောင်းအညာပြေအောင် နှိပ်နယ်ပေးတာတို့၊ မိဘမကျန်းမာရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဂရုတစိုက် ပြုစုတာတို့” ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျေးဇူးဆပ်နည်း – မိဘရဲ့စိတ်ဓါတ်မြင့်မားရေးအတွက် စိတ်အာဟာရတွေနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နေတာ ကိုခေါ်ပါတယ်။
ဓမ္မနည်းနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နည်း – စိတ်မထားတတ်တဲ့မိဘကို စိတ်ထားတတ်အောင်၊ ကုသိုလ်နည်းပါးတဲ့ မိဘကုသိုလ်တိုးပွားအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးတာကို ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့် မိဘရဲ့စိတ်ဓါတ်မြင့်မားမှုနဲ့ ကုသိုလ်တိုးပွားမှုက ဘ၀လွတ်မြောက်မှုအဆင့်အထိ တက်လှမ်းနိုင်သွားပြီဆိုရင် အဲဒီလို တက်လှမ်းနိုင်အောင် ဓမ္မနည်းနဲ့ ကျေးဇူးအကျေဆပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် မိဘမှာ အောက်ဆုံးထစ် တစ်မဂ်တစ်ဖိုလ် ကျွတ်တန်းခိုခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ပဲ မိဘကျေးဇူးအကြွင်းမဲ့ ကျေသွားပါပြီ။
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရင်လည်း မိဘကျေးဇူးအကြွင်းမဲ့ ကျေပါတယ်။
ပုထုဇဉ်အဆင့်ကနေ သောတပန်အရိယာအဆင့်ကို ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ သိပ်မကြာလှတော့တဲ့ တချိန်မှာ ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ သေချာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိခင်ကို သောတပန်ဖြစ်အောင် ဓမ္မနို့ရည်တိုက်ကျွေးပေးတဲ့ သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မိခင်ကျေးဇူးကို နို့နှစ်လုံးဖိုးလုံးကျေအောင် ဆပ်ပြီးသား ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
မဂ်ဖိုလ်ရဖို့ အနီးကပ်ဆုံးအလုပ်က –
– ၀ိပဿနာအလုပ် အားထုတ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးခြင်း၊
– ၀ိပဿနာစာအုပ်၊ တိတ်ခွေများ လှူဒါန်းခြင်း၊
– ၀ိပဿနာရဲ့အခြံအရံအထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်း၊
– ဘာကုသိုလ်ပဲပြုပြု နိဗ္ဗာန်ကို ဦးတည်ပြီးပဲ ပြုဖို့တိုက်တွန်းပေးခြင်း၊
– ကိုယ့်ကြောင့် မိဘရဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်မှု အနှောင့်အယှက် မဖြစ်အောင် အရာရာသတိပြုနေထိုင်ခြင်း။
သူတစ်ပါးကို မဂ်ဖိုလ်ရအောင် လုပ်ဖို့က မသေချာတဲ့အတွက် မိဘကျေးဇူးကို ဒီတစ်ဘ၀တည်းနဲ့အကျေဆပ်ချင်လွန်းသပဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒီဘ၀မှာပဲ အနည်းဆုံး တစ်မဂ်တစ်ဖိုလ်ရအောင် ၀ိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
တကယ်တော့ ရှည်လျားလွန်းလှတဲ့ အစမထင် သံသရာမှာ သူကမိဘဖြစ်လိုက်၊ ကိုယ်ကမိဘဖြစ်လိုက်နဲ့ အပြန်ပြန် အလှန်လှန်ကျင်လည်နေကြရတာမို့ ဘယ်သူကျေးဇူးကိုတော့ဖြင့် ဘယ်သူကကျေအောင် ဆပ်ပြီးပြီဆိုတာ ပုထုဇဉ်လောကမှာ လုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူး။
ဒါ့ပေမယ့် ကျေးဇူးကျေတာ မကျေတာကို အဓိကမထားဘဲ “ကျေးဇူးဆပ်နေဖို့သာအဓိက” လို့ နှလုံးသွင်းပြီး လောကနည်းနဲ့ရော၊ ဓမ္မနည်းနဲ့ပါ မိဘကို အမြဲကျေဇူးဆပ်နေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.
3 Responses to မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်နည်း
Pingback: ပြင်ရမယ့် စိတ်တွေ (၂) « ဗုဒ္ဓဟောကြား မြတ်တရား
Black Eyed Sophi says:
တစ်နည်းနည်းနဲ့ တော့ ကျေအောင်ဆပ်မှာပါ ….